အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကျွေးမယ်ပြောထားတဲ့ ရှမ်းအာလူးထမင်းချဉ်......း)
အဲတော့ မြန်မြန်ပဲ ပြောပြမယ် ဘယ်လိုချက်ရလဲ ဆိုတာ................
ကဲ အခုလိုဆိုတော့ စားသောက်ချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ အာလူးထမင်းချဉ်ပါ။ တချို့ကလဲ ကြိုက်တတ်ရင် ငါးနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်။ တီကတော့ လူမျိုးဘာသာမရွေး အားလုံးစားလို့ ရအောင် သတ်သတ်လွတ်ပဲလုပ်ထားတယ်လေနော်။ ပြီးတော့ တီက ဒါပထမ ဆုံးအကြိမ်ချက်ကြည့်ခြင်းပါ။ အဆင်ပြေပြေစားလို့ဖြစ်တဲ့အပြင် တော်တော်လေးကို အရသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ (တယ်တော်တဲ့ ငါပါလားနော်...ယောင်းမတော်ချင်တဲ့ မောင်ရှိအစ်မတွေ၊ တူမတော်ချင်တဲ့ တူရှိအဒေါ်တွေ၊ မရီးတော်ချင်တဲ့ အကိုရှိ ညီမတွေ၊သမီးချွေးမ တော်ချင်တဲ့ သားရှိအမေတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆက်သွယ်ကြနော် နံပါတ်စဉ်အလိုက်တွေ့ဆုံပေးမယ် အားလုံးကို...ခိခိ) နောက်တခု က ချက်တဲ့နေရာ မှာ တီ က တီ့အမေ ချက်ကျွေးတာ မြင်ဖူးနေကြအတိုင်း သတိရတာလေးတွေထည့် ဖြည့်ချက်ရတာပါ။ ကိုယ်တိုင်တောင်တခါ မှမလုပ်ဖူးဘူးလေ ဒါက ပထမ ဆုံး....း)။ ခုတော့..................အားလုံးကို စားစေချင်လို့ ကြိုးစားပမ်းစားချက်ထားပါတယ်။ စားသွားကြနော်။ နာမည်တွေ တပ်ပြီးမခေါ်တော့ဘူး တော်ကြာ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ က ဘယ်သူ့တော့ မခေါ်ဘူးပေါ့လေ.... ဘာလဲမကျွေးချင်ဘူးလား.......... စသဖြင့် စကားနာထိုး စကားများ စကားရှုပ်ရတာတွေကြောင့်ပါ။
Posted by တီချမ်း at 10:13 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အာလူးထမင်း
Mae May 1, 2009 at 2:31 AM
ဗိုက်ဆာဧ။်.. စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ်၊ ခါတိုင်း ငါးထမင်းပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်၊ နည်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ
khin oo may May 1, 2009 at 2:32 AM
စားသွားတယ်။ စေတနာပါလို့ထင်တယ်။ ပိုကောင်းတယ်။
khin oo may May 1, 2009 at 2:33 AM
ဖိုးစိန် May 1, 2009 at 3:46 AM
ကြယ်ဖြူစင် May 1, 2009 at 9:39 AM
Mogok Thar May 1, 2009 at 10:12 AM
မနက်စာ ထမင်းချဉ် လာလွေးသွား ပါဒယ်
wai May 1, 2009 at 10:59 AM
T chan yay,
Thanks for your sharing. Looks delicious and clean. I wanna eat it so much.
Whats wrong with that; ခင်ခဲ့တာလေးတွေ ကို တကယ်နှမြောမိတယ်
T chan yay, lock your heart and try to be thick skin!!!!!
ချစ်တီရေ....... ညကလာမစားလိုက်ရဘူး။ အခုမှ လာစားရတယ်။ အေးနေပြီ။ မစားရ၊ ပုံကြည့်၊ သရေကျ ရတဲ့ ဘ၀ပါလားနော်။ ဒါပေမယ့် လုပ်စားတတ်အောင်တော့ အဆင့်ဆင့် လေးသင်ပေးထားလို့ ရှဲ့ရှဲ့နော်။ ဒါကြောင့်တီကို အရမ်းချစ် ရော့ အာ.....၀ါးးးးးးး X 100000
ဒါနဲ့ ရှမ်းထမင်းချဉ်ကို စားချင်စရာဖြစ်အောင် လက်အိတ်မသုံးပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထမင်းကို နယ်တယ်နော်... အဟိ ဒါကြောင့် မမကွန်က စားကောင်းတယ်လို့ ပြောသွားတာနေမှာ.. :D
ကိုရဲ May 1, 2009 at 1:20 PM
တီရေ လာစားတရ် အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းဗိုက်ချာရို့  ။ တီရက်ချက်ဒယ် ။ တိုဟူးနွေးကို ပြောတာပြောတာ ကျွေးလည်းကျွေးဝူး ။ ချက်ကျွေးနော်နော်နော်နော်ရို့  ။ ခုတော့ ရှမ်းအာလူးထမင်းလေးပဲ မွေးရပ်မြေအလွမ်းပြေချားတွားပီ ။
မှတ်ချက် ။ ။ ပါဆယ်ဆွဲသွားသေးသည် ။
Rita May 1, 2009 at 2:03 PM
အော် အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် ဖိုးစိန်ပဲ စာဖိုမှူးခန့်ရ ကောင်းမလား။ Addy ပဲ စာဖိုမှူးခန့်ရကောင်းမလား။ ဟင်းပြိုင်ချက်ခိုင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ရကောင်းမလား။
သဇင်ဏီ May 1, 2009 at 4:07 PM
...ကောင်ကလေးက ရည်းစားများတယ် လူတွေ ၀ိုင်းပြီး တားမြစ်ကြတယ် အောင်မလေး ကြောက်စရာ လန့်စရာ မင်းရဲ့ အကြောင်းတွေပဲ .... ဆိုပဲ.. ဟဟဟ.. လုပ်ထားကွ တီတီရ :D
ကောင်းကင်ပြာ May 1, 2009 at 5:15 PM
ကြည်ပီး သရေ များတောင်ကျမိပါ၏၊ စားချင်လိုက်တာ တီရေ၊ ခုတော့ ခုတော့
sweetpeony May 1, 2009 at 7:37 PM
တီ ကိုည ထဲကစောင့်နေရတာ...
Mr.Pu May 1, 2009 at 9:37 PM
Anonymous May 2, 2009 at 9:47 PM
nan May 2, 2009 at 11:28 PM
really love to read ur blog. while M' reading ur post, i could understand ur kindness.
မိုးခါး May 2, 2009 at 11:33 PM
စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်ဦးမယ် .. မှတ်သွားတယ် တီရေ ..
mgnge May 3, 2009 at 7:10 PM
ရှမ်းထမင်းချဉ် ကို အရမ်းကြိုက်တာ တီရ
ကျွန်တော့အမေက တော့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပဲနယ်ပြီး အလုံးလုံး တယ်.. ပြီးတော့ မှအဲ့အလုံးထဲ ကြက်သားထည့်ထားတာ..။
မောင်နှမတွေ အတုန်းကြီးတာ ရွေးလို့ မရအောင်လေ
သထုံသူ October 13, 2009 at 10:42 PM
ကျမတို့နယ်ဘက်က အစားသောက်မပာုတ်တော့လုပ်နည်းမသိဘူး. ခုတော့နောက်လုပ်စားအတွက်မှတ်သွားပြီ.။ ထွက်လာတဲ့ပုံစံကတော့ ကျမတို့ဘက်ဆီက သထုံထမင်းဝါ အတိုင်းပဲ..။မုန့်ပာင်းခါး ပာင်းရည်နဲ့တွက်စားရတာမျိုးပေါ့....။
SDL December 8, 2009 at 8:45 AM
ညက menu ထဲ ရှမ်းထမင်းချဉ်ဆိုတာ တွေ့လို့ ဘယ်လိုလုပ်လဲ ရေးပါဦးပြောမလို့ အတော်ပဲ...။
tune May 6, 2010 at 7:27 PM
If it is not good, it's due to your method and not me :P.
tune May 6, 2010 at 7:42 PM
It is externalizing !